UNGASHO KANJANI UXOLO KUNTOMBAZANE? - UMNYUZONG.COM - UBUHLOBO
Ungasho Kanjani Uxolo KuNtombazane?
Ikhaya Ubudlelwano Ezothando nezothando Ezothando Nezothando oi-Amrisha Sharma By Oda i-Sharma ngo-Agasti 1, 2011
Wenze iphutha noma walwa manje ufuna ukuxolisa? Ithi Uxolo! Uma ufuna ukuthi uxolo entombazaneni oyithandayo noma oyithandayo ngakho akunzima kangako. Vele ungavumeli ukuzazisa kwakho noma ukuziqhenya kwakho kungene lapho ufuna ukuthi uxolo entombazaneni.
Uma wazi ukuthi wenze iphutha futhi uyalibona iphutha lakho ngokusho ukuthi Uxolo ungabuyisela izinto kokujwayelekile. Ukulwa kujwayelekile ebudlelwaneni futhi izingxabano zilungile ebudlelwaneni obunempilo. Nawa amanye amathiphu okuthi uxolo entombazaneni oyithandayo noma oyithandayo. Akukhawulelwanga othandweni kuphela, ngisho nentombi esondelene kakhulu nawe idinga ukuzwa uxolo bese uzama lawa macebiso ukuthi uxolo:
ungayisebenzisa kanjani i-rose powder ebusweni
1. Uxolo yigama lomlingo elinezimangaliso kulo. Igama linamandla okulungisa izikhalazo ezedlule nokungcwaba izinkumbulo ezingemnandi okungenzeka zenzeka phakathi kwezithandani ngenxa yokulwa noma ukungaqondi. Uma udlulisa igama ngemizwa nangobuqotho lapho-ke kuzosebenza izimanga. Ukuthi uxolo ngeke kugcine ngokuqeda imizwa enzima evame ukukhuphuka ngemuva komzuzwana omubi nomlingani wakho kepha futhi kuzothuthukisa ukuqala kabusha.
2. Ukuzamukela kuyithiphu ebaluleke kakhulu uma ufuna ukuthi uxolo entombazaneni. Akekho umuntu ozalwa ephelele futhi ngakho bathambekele ekwenzeni amaphutha. Uma ugcina ukuzazisa kwakho noma ukuziqhenya kwakho ngaphambili uzokwenza izinto zibe zimbi kakhulu. Lazi iphutha lakho ngoba lizomenza azizwe asebenza kahle futhi ubheke phansi.
3. Uma uthi uyaxolisa entombazaneni ngokushesha ngemuva kokulwa kungenzeka kungasebenzi. Ngokuya ngesimo nangesizathu sokwenza i-tiff, yithi ngiyaxolisa.
4. Ezimweni ezimbalwa izinto zingase zingashintshi ngokushesha, ngakho-ke uma efuna isikhathi unganqikazi ukumnika isikhala futhi uzozibuyela kuwe njengokujwayelekile.
5. Zama ukulungisa amaphutha akho. Izinkinga ebudlelwaneni zivezwa ngesikhathi se-tiff ngakho-ke sebenzela kulawo maphuzu ukuvumela ubudlelwane bakho buqine.
6. Esinye sezeluleko ezibaluleke kakhulu phezulu sithi uxolo entombazaneni ukukhumbula- ungalokothi uthi uxolo ngocingo noma nge-inthanethi uma ungekho ebudlelwaneni bebanga elide. Iya mathupha ukuyohlangabeza noma umshiyele incwadi edabukisayo. Iyathandana futhi ikhombisa ukuthi uyamfuna futhi uzizwe ungaziphathi kahle.
7. Thatha izinto azithandayo njengoshokholethi, izimbali noma izipho ukumjabulisa futhi ancibilike intukuthelo yakhe ngemizuzwana.
irayisi ubuso iphakethe isikhumba oily
Yithi uxolo entombazaneni ongafuni ukulahlekelwa yiyo bese ubona isimangaliso segama Uxolo. Izoshintsha izinto ikubuyise njengokujwayelekile. Unganqikazi, amantombazane athinteka kakhulu ngokomzwelo futhi ukuzwa uxolo kuyasebenza impela. Izame!
isikhathi esihle sokuphuza itiye eliluhlaza
sanju from shaka laka boom boom
kanjani ukususa izinwele ezimpunga ngokwemvelo ekhaya
ungalunga kanjani unomphela ngokwemvelo
indlela yokwenza ubtan ekhaya